रासस शनिवार, आश्विन ४, २०७६, ०८:३७:०० मा प्रकाशित
मेन्लो पार्क । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले दशौँ हजार एप्सलाई निलम्बन गरेको छ । सन् २०१८ मार्चको केम्ब्रिजको विश्लेषणात्मक तथ्याङ्कका कारण फेसबुकले अध्ययनका लागि ती एप्सलाई निलम्बन गरेको कम्पनीले जनाएको छ ।
निलम्बनमा परेका एप्समध्ये झण्डै चार सय ओटा निर्माता छन् । आफ्ना प्रयोगकर्तासँग सम्बन्धित विवरणहरु चोरी हुनेगरी भएको क्याम्ब्रीज काण्डपछि फेसबुकले एप्सहरु निलम्बन गरेको हो ।
फेसबुकले सबै एप भने जोखिमपूर्ण नभएको स्पष्ट पारेको छ । सन् २०१८ मा केम्ब्रिज एनालिटिका नामक कम्पनीले बिनाअनुमति धेरै फेसबुक प्रयोगकर्ताको विवरण चोरेको तथ्य बाहिरिएको थियो ।
आज मुस्लिम धर्मावलम्बीले बकर इद मनाउँदै शनिवार, श्रावण १७, २०७७, ०९:५३:००
रेडक्रस रक्तसञ्चार सेवाको ५५औँ वर्ष पूरा देशभरिमा विभिन्न सङ्घसंस्थाहरूबाट तीन हजार ४७८ घुम्ती रक्त सङ्कलन गरिएको छ भने केन्द्रीय रक्तसञ्चार सेवाबाट मात्रै ३९ हजार ७५५ युनिट रक्त सङ्कलन गरिएको रेडक्रसले जनाएको छ । सोमवार, श्रावण १२, २०७७, १४:०४:००
हेटौँडा अस्पतालको ओपिडी सेवा बन्द हुने शनिवार, जेठ १०, २०७७, १२:१४:००
कोरोना महामारी हुँदा ३ जनाले थपे आफ्नो सम्पत्तीमा १०३ अर्ब डलर
आहाराको कमीले आफ्नै बच्चा खान बाध्य ध्रुवीय भालु, २१औँ शताब्दीसँगै लोप हुने
साढे ११ लाख रुपैंया पर्ने मास्क !
इटालीमा गुलाबी हिउँ पर्‍यो
शेर्पा जातिको डीएनएबाट कोरोनाको उपचार !
गोराभन्दा गहुँ गोरो वर्णका मानिसमा कोरोनाले मर्ने सम्भावना बढि